Influ2: YeMunhu-Yakavakirwa Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM) Yekushambadzira Platform | Martech Zone
Accounts usaite sarudzo, vanhu do. Yakabudirira Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM) chirongwa chinoenda mushure meakaundi padanho rehurongwa asi chinotaura nevanhu padanho rekuuraya. Influ2 inotsanangura izvi seyakakwira-resolution ABM chirongwa uko kwakakosha maficha anosanganisira:
Drill kuboka rekutenga. Enda pamusoro pekusarudza maakaunzi akanangwa: tsvagurudza vakasarudza-sarudzo vanosanganisira anotenga mapoka emaakaunzi ako. Tarisa kune iyo persona tsananguro yeICP yako kuisa pamwechete rondedzero yevagadziri-sarudzo iwe waunoda kuteedzera mune yako yepamusoro-resolution ABM chirongwa.
Meseji yakasarudzika. Iko kugona kutaura kune chaivo vanhu kunotora kwako pachako kune inotevera nhanho. Mamaneja evadiki anofunga zvakasiyana nevakuru veC-level. Nyorera mutauro wakakodzera kuti utumire akakodzera mameseji kune akasiyana manas.
Shandisa nzira dzekutaurirana nevanhu. Akaunti-yakavakirwa kutengesa zvigadzirwa zvekushandisa senge Outreach kana Salesloft yakatsiva zvakazara zvakanangwa email-kushambadzira mishandirapamwe yekuita kutaurirana kuve kwechokwadi. Influ2 yakagadzirirwa kugadzira kushambadzira kwakagadzirirwa munhu kusvika padanho rakafanana.
Multi-kubata vatengi nzendo. Regedzera munhu-anoverengeka kuita masaini ekuvaka akaomesesa akawanda-ekubata nzendo. Kubaya pamushumo kushambadzira kunogona kukonzera email ine chinongedzo chekutora mushumo. Munhu anogara achifarira nhaurwa chaiyo anogona kuwedzerwa kumushandirapamwe pamusoro penyaya iyi. Vanhu vakapinda pawebhuinar vanogona kugamuchira kushambadzira kwevanopinda musangano. Iwe unogona kufunga nezve zviuru zvemazana-ekubata nzendo dzinogona kuvhurwa neiyo yepamusoro-resolution ABM nzira.
Influ2: YeMunhu-Yakavakirwa Kushambadzira uye ABM
Kufuridzira2 munhu-based kushambadzira chikuva chevatengesi veB2B, uye inogadzirisa yakakosha orchestration dissonance pakati pekushambadzira zviitiko nekutengesa. Iyo inonunura inoshanda zvemukati kushambadzira, uye zvakare inogadzira zvine hukama hukama nevatengi izvo zvinoguma zvakavharwa madhiri.
ne Kufuridzira2 nhanho yega yega yerwendo rwevatengi (kubva kumusoro-kwe-iyo-fanera chiziviso chiziviso uye kudiwa kwechizvarwa matanho kumatengesi uye kuedza kwekuchengetedza kwevatengi) kunosimbiswa nekushambadzira kwakanangana neako. Na Influ2, mabhizinesi anokwanisa:
Kutarisa Yakasarudzwa Sarudzo-Maka - sarudza vanhu vanokodzera mukati meakaundi account kuti uone kushambadzira kwako. Unganidza yako CRM kana yekushambadzira otomatiki software kuti uenzanise yako yekunangisa nekutengesa kwako kana kushambadzira fanera. Influ2 inopa kusangana pamwe neese makuru CRM uye yekushambadzira otomatiki software, senge Salesforce, HubSpot, Marketo, Outreach, nezvimwe.
Gadzirisa Yemunhu Anotenga - Gadzira mashoma akasiyana mameseji emunhu akasiyana mukati meimwe account. Chengetedza icho chakanangana nebasa remunhu basa kana nzvimbo yebasa. Iwe haungataure neVP yekushambadzira nenzira imwecheteyo yaungaita kuna HR director, saka nei uchivaratidza shambadziro imwechete?
Teedzera Yega Yega Ad Engagements - Yese fungidziro, tinya, shanyira, uye / kana kubatanidzwa chiratidzo chekuda. Influ2 inokutendera kuti utarise dzese pane munhu-kune-munhu hwaro. Shandisa iyi data kuisa pamberi kuti uwane kunzwisiswa kuri nani kwekuita kwako meseji kune imwe account uye nevanhu vari mune ino account.
Ziva Kutengesa-Kwakagadzirira Targeti Nekuita Maitiro - Maitiro ekuzvibata anokutendera kuti uburitse tarisiro-yakagadzirira tarisiro uye maakaundi aungadai usina kuona zvimwe. Influ2 inoyera kukanganisa kwako kushambadziro kumunhu wese wauri kunongedza uye nekuishandura kuita zvibodzwa kuitira kuti ugone kuona nyore vatungamiriri vanokoshesa zvakanyanya kukoshesa. Kana munhu akabaya pamushambadziro wako kaviri, obva apedza masekondi zana nemakumi masere pane peji rako rekumhara uye odzoka kuwebhusaiti yako kaviri mukati mevhiki rimwe, icho chiratidzo chakasimba munhu wacho anofarira uye anoda kutaura. Influ120 inoteedzera zvese izvi zvekubatana uye nekuzvishandurira muchimiro chehunhu kuitira kuti rako rekushambadzira uye rekutengesa rigone kuzviita.
Kushambadzira kwevanhu-kunotibatsira nekuona kuti chaiyo chaiyo B2B-vanoita zvisarudzo vari kusvikwa pamberi pekutengesa kuita, izvo zvinotyaira kuyerwa kuyerwa nekuwedzera mamitero ekupindura kune kubuda kwekutengesa kwekuedza.
Stephen Ngo, Dhijitari Kukura maneja, Profitwell
Kufuridzira2 inoshanda kune ese makuru midhiya, kusanganisira Facebook, Twitter, LinkedIn, Yahoo, uye Google Ads.
Disco Shandisa Nyaya
Nezviitiko zve-mu-munhu zvakadzimwa uye nhamba dzenhare dzehofisi dzisingashande nekuda kwedenda, mutungamiri wezve tekinoroji zviri pamutemo DISCO vakatambura kuti vasvike vateereri vavo - magweta uye madhipatimendi emutemo emakambani - uye vanotaura kushambadzira.
Iyo nyowani yemunhu-yakavakirwa nzira yekutengesa yakapayona neFlulu2 yakaita kuti DISCO ikunde izvi uye iende pamberi pevangangoita vatengi pavanenge vachinyanya kubatikana. Pakati paGunyana 2020 kusvika Kurume 2021, DISCO yakakwanisa kusvika pamusoro pezviuru makumi matatu pamatanho makumi maviri nemana emaakaundi. Iko makumi mashanu nemakumi masere neshanu nemakumi mashanu nemashanu ekuratidzira kwakaburitsa makwikwi makumi manomwe nepfumbamwe, kushanya makumi mana nepfumbamwe uye kutyaira pamusoro pemikana zviuru zviviri nevasarudzo DISCO zvakare yakabatanidza Salesforce neiyo Influ30,000's chikuva saka zvinotungamira zvakaenda chaiko pakutengesa.
Rongedza An Influ2 Demo
Tags: abmaccount-based kushambadzirakushambadzira kwekushambadzirafacebook adsgoogle adsgoogle kushambadzirainflu2linkedin adsnounhupersona yakanangwaPersonalizationsalesforcetwitter adsyahoo ads